सम्पादकीय टोली ▷➡️ Postposmo | पोस्टपोस्ट
पोस्टपोस्ट एक AB इन्टरनेट वेबसाइट हो। यस वेबसाइटमा हामी संस्कृति, समीक्षा, चलचित्र, पुस्तक, संगीत, अर्थशास्त्र र वित्त, आत्म-सुधार र धर्ममा रिपोर्ट गर्छौं। XNUMX औं शताब्दीको नागरिकको भाग बन्न र सूचित हुन चाहने सबैको लागि एक रोचक मिश्रण
यो 2005 मा सुरु भएदेखि, Postposmo आफ्नो क्षेत्र मा अग्रणी कम्पनीहरु मध्ये एक बन्न शानदार वृद्धि भएको छ।
Postposmo को सम्पादकीय टोली एक समूह मिलेर बनेको छ विज्ञहरू र सूचना र संस्कृतिको बारेमा भावुक। यदि तपाईं पनि टोलीको हिस्सा बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले हामीलाई सम्पादक बन्नको लागि यो फारम पठाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाई के खोज्दै हुनुहुन्छ भने सूची हो लेख र कोटिहरू जुन हामीले वर्षौंदेखि व्यवहार गर्‍यौं, तपाईं यो लिंक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ खण्डहरू.
ग्राफिक डिजाइनर र प्रचारक। कला र डिजाइन को इतिहास को प्रेमी। साउल बास र स्टीफन किंग जीवन साथीहरू।
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि
नमस्ते! म हाल भेटेरिनरी प्राविधिक सहायकको रूपमा काम गर्छु, यद्यपि केही वर्ष पहिले मैले वातावरणीय विज्ञान अध्ययन गरें, जसले मलाई बहु-अनुशासनात्मक बनाउँछ। यद्यपि मेरो सबैभन्दा ठूलो जुनून सामान्यतया जनावरहरू हो। म सानैदेखि विभिन्न ठाउँमा बसेको छु र धेरै व्यक्तिहरूसँग मेरो सम्पर्क भएको छ, त्यसैले म यो ब्लगमा लेख्छु। के हामी पढ्छौ?
हामी प्रकृति, जनावर र सबै प्रकारका बोटबिरुवा प्रेमी हौं। यदि तपाइँ पनि जनावर संसारबाट मोहित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ हाम्रो लेखहरू पढ्न मन पराउनुहुनेछ।
वचन मा बढ्दै
बाइबल र परमेश्वरको वचनको अनन्त विद्यार्थी। मलाई उपदेश र प्रार्थना मन पर्छ। विश्वास खेती गर्नुहोस्, यस समयमा यो पहिले भन्दा बढी आवश्यक छ।
आर्थिक र वित्तीय जानकारी मा तपाइँको मनपर्ने कुना। आफ्नो वित्तलाई नयाँ स्तरमा लैजानको लागि तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
Viajealcosmos को सम्पादकीय टोली, बाह्य अन्तरिक्ष र पृथ्वी बाहिर सबै कुरा मा एक विशेष वेबसाइट।
साहित्य र पुस्तक प्रेमी। पहिले योमोलालिटेरातुरामा लेख्थें र अहिले पोष्टपोष्टमा गर्छु ।
के तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत जीवन को विकास र तपाइँको चुनौतीहरु लाई पार गर्न को लागी रुचि राख्नुहुन्छ? पुरानो वेब desarrolltuvida को टोलीमा हामी तपाईंलाई यस महत्त्वपूर्ण मामिलामा हाम्रा सबै ज्ञानहरू प्रदान गर्दछौं।
संस्कृतिहरू बारे जान्नुहोस्
वेबसाइट Conocedeculturas को सम्पादकीय प्रोफाइल, हाल Postposmo.com भित्र एकीकृत
संस्कृति, टेलिभिजन र आधुनिक ढाँचाहरूको बारेमा भावुक। टिभी, शृङ्खला, चलचित्र, किताबहरू र कुनै पनि प्रकारको ज्ञान।